လော့ခ်ဟိမာတင်/ဘိုးအင်း အက်ဖ်-၂၂ ရက်ပ်တာသည် လူတစ်ယောက်စီး အင်ဂျင် ၂လုံးတပ် ပဉ္စမမျိုးဆက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော (supermaneuverable) တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးကို ရေဒါမြင်ကွင်းမှ ဖမ်းမိရန် ခက်ခဲသော ရေဒါလှိုင်း ပုံရိပ်လျော့ နည်းပညာ (stealth technology) ကို အသုံးပြုထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် လေကြောင်း စိုးမိုးရေး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး ၊ အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် ရှာဖွေထောက်လှမ်းရေး တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ လော့ခ်ဟိမာတင် အေရိုနော့တစ်သည် အဓိက ကန်ထရိုက်တာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ဖရိမ် အစိတ်အပိုင်း အမြောက်အများ၊ လက်နက် စနစ်များ နှင့် အက်ဖ်-၂၂ ကို အပြီးသတ် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါတနာ ဖြစ်သော ဘိုးအင်း ကာကွယ်ရေး၊ အာကာသနှင့် လုံခြုံရေးကမူ အတောင်ပံများ၊ ကိုယ်ထည်နောက်ပိုင်း၊ အေဗီရွန်းနစ် တပ်ဆင်မှု နှင့် ပိုင်းလော့နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းပေးခြင်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။
↑ "FY 2011 Budget Estimates, p. 1–15 (61)." United States Air Force, February 2010.
Goodall, James C. "The Lockheed YF-22 and Northrop YF-23 Advanced Tactical Fighters", America's Stealth Fighters and Bombers: B-2, F-117, YF-22 and YF-23. St. Paul, Minnesota: Motorbooks International, 1992. ISBN 0-87938-609-6။
"Lockheed Martin F-22A Raptor", Superfighters: The Next Generation of Combat Aircraft. London: AIRtime Publishing Inc., 2002. ISBN 1-880588-53-6။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဖ်-၂၂_ရက်ပ်တာ&oldid=373837" မှ ရယူရန်
၃၀ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၇:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၇:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။